တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကောက်ညှင်းပေါင်း အတွေး
I did't know 'Kyar's story. It is funny. Thanks for sharing!
This post made me laugh:-D
ဟားဟားဟား။ ရီနေရတယ် မမေဓါ။ ကြာပွင့်ထဲ ကြာဖူးသွားထည့်တဲ့ပန်းရံဆရာ...။
ပြောင်းဖူးအကြောင်းတော့ ကြားဖူးတယ်။ ခုမှပဲ ကြာတွေအကြောင်းသိရတော့တယ်။ အတော်ဟုတ်တာပဲနော်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ဗယာကြော်ကတော့…အင်း….ညီမတို့ အဖွားဆိုလဲ အဲလိုပဲပြောဖူးတယ်။ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဘေးဘယာကျော်လွှားနိုင်အောင်ဆိုလား ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်တက်မှာ အဲလို ကျွေးတာမှတ်မိတယ်။
ကျနော်လည်း ကြာပန်းကြီး အကြောင်း အမပြောမှ သိရတယ်။ ဟီး…တကယ်ပေါတာပဲ။ ကြာပန်းဆိုပေမယ့် ကြာပွင့်ဆိုလည်း ဟုတ်တာပဲနော်။ ကြာရင်တော့ ပွင့်လောက်ပါရဲ့။
အင်း.. အတိတ်နမိတ်ကို ယုံကြည်လက်ခံတာရဲ့ အကျိုးဆက်အတွက်ပဲထင်ပါရဲ့.. ရောင်းကောင်းနေတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်တွေမှာ မနောမယ တို့လို၊ ဂမ္ဘီရ တို့လို၊ စာစောင်တွေ ရောင်းတန်းဝင်နေတယ်...နောက်ပီး.. သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ... ဘိုးတော်တွေ နေရာရချက်ကတော့....... ပြန်ရောက်ရင်တော့ ဘိုးတော်ပဲ လုပ်စားတော့မယ်.. ဟဲဟဲ
12/13/2006 11:18 PM
Pls keep posting about the news... We are apart of myanmar and once we see your blog, we know the news..
ကြီးမေ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး စာတွေလေ့လာရတာမောလို့ဘလော့မွှေနေတာ ပို့စ်အဟောင်းတွေ မဖတ်ရသေးတာ ကျန်နေလို့ ဖွသွားတယ် ရွှေပြည်ကလူတွေကတော့ ဒီလိုနဲ့လမ်းဆုံးကြတော့မှာလား မသိဘူး အပြောင်းအရွှေ့ထွက်ခါနီးဆို နေကြာစေ့ မစားရတာနဲ့ ပြောင်းဖူး မစားရတာနဲ့ အခုဆို ဆူပါကော်ဖီလည်း မသောက်ကြတော့ဘူး ဗျ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတော့ တံဆိပ်ပြောင်းရတော့မယ်ထင်တယ် ဘာဆိုင်လဲလို့မမေးနဲ့ဗျာနော သူကြီးတွေ ခဏခဏလာလာစစ်ဆေးတော့ အဆူခံရတဲ့အထဲပါမှာစိုးလို့ ဆူပါ မသောက်ကြတာတဲ့ဗျာ